Sunday October 17, 2021 - 16:13:56
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in weeraro culus lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka 'Puntland'.
Xoogagga Al Shabaab ayaa saaka aroortii hore weerar madaafiic ah kula jarmaaday saldhigga ciidamada 'Puntland' ee deegaanka Af Urur duleedka Boosaaso.
Madaafiicda kadib waxaa dhacay dagaal fool ka fool ah, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Saciid Deni ay kasoo baxeen deegaanka Af Urur kadib markii madaafiicda lagu duqeeyay balse waxay weeraro dhabbagal ah kala kulmeen dagaalyahannada Al Shabaab.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiic iyo rasaas xooggan oo labada dhinac ay is dhaafsanayeen balse illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkii Af Urur.
Dhinaca kale laba qarax ayaa maanta ciidamada Puntland lagula beegsaday deegaanka Sugurre ee duleedka Boosaaso, warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in mid kamida qaraxa lagu dilay 2askari islamarkaana lagu gubay gaari nuuca dagaalka ah.
Askarta ladilay waxaa kujiray madaxii zaadka ciidamada PS-ta Puntland kaasi oo magaciisa lagusoo gaabiyay Shabiye.